Iva mutsigiri wePixelHELPER
Ndiri PIXEL MUBATSIRA!
Ita shuwa kuti iwe unomanikidza! Vanopa vanobatsira mukufara kwehasha dzeruzhinji. Ita kuti mharidzo dzemiganhuro dzekumhanyisa zvigoneke. Hakuna kwese kwaunogamuchira kuraira kwakawanda kurusununguko rwehunyanzvi & kodzero dzevanhu kune yega yakapihwa euro sesu.
Ungave iwe unoda kutitsigira isu tisinga zivikanwe nekuti ungazoenda kujeri munyika yako yeanopa? Absolutist uye udzvinyiriri nyika kunyanya zvinoita kuti zvive zvisingaite kuti ubatanidzwe. Ndokumbirawo ushandise digital wallet yedu, neimwe nzira peta pasi uye shandisa yakajairwa GLS Bank mupiro fomu:
Nuseir Yassin akasangana naPixelHELPER muBerlin. Iyo Rubiks Cube kubva kumamiriyoni ayo ekutanga mavhidhiyo ikozvino iri yePixelHELPER.
Zvitendise iwe mune yedu chiitiko mishumo yebasa redu rakakosha.
Ndapota mupiwe kuburikidza nePaypal kune paypal@PixelHELPER.tv kana kuti shandisa iyo PixelHELPER yeChitsuwa chekupa zvikamu. Kana iwe uchida kushandisa kadhi rako rechikwereti, shandisa fomu yezvipo pasi apa.
Bhengi: GLS Community Bank
Muridzi: kwete purofiti PixelHELPER Foundation
Zvimwe Western Union: kupa
Oliver Bienkowski, chinangwa nyika Germany
Dharirai kubudiswa kwekombiyuta se text text * .txt
Income mutero kudzokera
DZIDZIDZE SEZVO ZVINOKUDZIDZWA KUBVA MU TAX
Mipiro kune masangano asina ruzivo inogona kudzingwa semari yakakosha kusvika kune chikamu che20% yemari yako.
chaiwo Shanduro idzi kuderedza yenyu taxable mari kana vari pamusoro mureza huwandu EUR 36.
Nezvipo kune 100 Euro haufaniri kutumira chero magwaro anotsigira. Zvisizvo zvisiri izvo zvinosungirwa zvinoshandiswa kusvika kune 200 Euro. Kuregererwa kunobatsira kwakakosha kwakakwana.
Iva noushingi. Itaidzira. Ivapo apo boka duku revanhu rinoshandura kuchinja kukuru munzanga.
Chenjerera kudhindwa & kutarisirwa - titsigire isu ikozvino! Sezvo iwe unopa iwe unopa mupiro unokosha pakufadza kwehuruzhinji - kune nyika iri nani.
Iva sekrete ikozvino uye uite kupesana kwemuchinjikwa kunogona. Hakuna kupi kwaunowana kupandukira kwakanyanya uye kupesana kweEuro yega yega yakapiwa apa.
Iwe uchagamuchira tsamba ye-e-mail nemamakwikwi emazuva ano. Iwe unoona kuti kodzero dzevanhu dzakaputsika uye hakuna munhu anotarisa? Tinotarisira shoko renyu! Sevatsigiri / mupi, iwe uchagamuchira mukana wega wega uye wega wekupinda muchikwata chepixelHELPER mishandirapamwe. Sangano redu rine mamiriro ekuremekedza anozivikanwa. Nokudaro, zvipo zvose ndezvekutengesa mutero.
E-Mail yevatsigiri vanotsigira: Oliver Bienkowski, oliver@PixelHELPER.org
3 MAZANO AKANAKA KUVA PIXEL HELPER
Isu tinobudirira! Tinoshanda zvakanaka uye zvakajeka uye tinoita pasina masimba makuru ekushandisa.
Isu tinodanidzira! Nezvipo zvako unobvumira mapurogiramu anobudirira ekodzero dzevanhu.
Tinobatisisa! Basa redu rinoda kushivirira uye kufema kwenguva refu. Nezvipo zvekusingaperi iwe unotibatsira kuti tigare takarongedzwa!
KUDZIRA KWEMUSORO WEUSU ...
Iyo PixelHELPER Foundation inobatsira uye inozivikanwa seyo inonyatsokodzera.
Mipiro yako mutero inobviswa.
Isu tinofara kukupa risiti yekubatsira.
Zvechokwadi, zvipo zvinowanzogadziridzwa zvinogona kuchinjwa kana kugumiswa chero nguva pasina chiziviso.
Kuburikidza nemipiro yako yakananga kumabhadharo edu rekupa hwedu hatina kubhadhara mari yekutsvaga.
Iyo PixelHELPER Foundation inonyanya uye inotsinangurira zvinangwa zvechirongwa mukati mezvinoreva chikamu "Mitsva Inobatsira Inobhadhara" yeRhafu Code. Izvo zviri maererano neshoko rekuregererwa kwehofisi yemutero Magdeburg ye28. January 2016 isingabhadharwi nekambani uye yekutengesa mutero nokuti inoshanda chete uye yakajeka mutero-ine ropafadzo inobatsira uye inobatsira mukati mezvinoreva §§ 51 ff AO.
Iva mutsigiri wePixelHELPER June 8th, 2020Oliver Bienkowski